ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေး ချင်းတစ်မျိုးသားလုံး ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ရန် တိုက်တွန်း - Yangon Media Group
ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေး ချင်းတစ်မျိုးသားလုံး ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ရန် တိုက်တွန်း
ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇- ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးအတွက် အမျိုးသားရေး စိတ်ဓာတ်ဖြင့် ချင်းတစ်မျိုးသားလုံးဝိုင်းဝန်း ဆောင်ရွက်ကြရန် ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး (CNF)က တိုက်တွန်းလိုက်သည်။
၂ဝ၁၈ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂ဝ ရက်တွင် ကျရောက်မည့် နှစ် ၇ဝ ပြည့် ချင်းအမျိုးသား နေ့အခမ်းအနားနှင့်ပတ်သက်၍ ချင်းအမျိုး သားတပ်ဦးက ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ် ပြန်တိုက်တွန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းသည့် ပြည်ထောင်စုဖြစ်ပေါ်ရေး ချင်းအမျိုးသား တပ်ဦးအနေဖြင့်လည်း ဆောင်ရွက်နေ ကြောင်း CNF လက်ထောက်အထွေထွေအ တွင်းရေးမှူး (၁) ဦးရွှေခါးက ဒီမိုကရေစီ တူဒေးသို့ ဖောဖော်ဝါရီ ၁၇ ရက်တွင် ပြောသည်။
”ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ဖို့လည်း တိုက်တွန်းပါတယ်။ ကျွန်တော်ကငြိမ်းချမ်းတဲ့ ပြည်ထောင်စုကိုသွားဖို့ လုပ်ဆောင်နေ ပါတယ်” ဟု ၄င်းကဆိုသည်။
နှစ်ပေါင်း ၇ဝ လုံးလုံးရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ နေရသည့် နိုင်ငံရေးပဋိပက္ခ၊ အမျိုးသား ရေးပဋိပက္ခနှင့် နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများကို ပြည်ထောင်စုသားတို့၏ စုပေါင်းအားဖြင့်သာ အဖြေရှာနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ချင်းပြည်တည်ဆောက်ရေး၊ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးအတွက် အမျိုးသားရေး စိတ်ဓာတ်ဖြင့် ချင်းတစ်မျိုးသားလုံး ဝိုင်း ဝန်းဆောင်ရွက်ကြရန် တိုက်တွန်းကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ယင်းအပြင် ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး အနေဖြင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်၊ အမျိုးသား တန်းတူရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးများ အာမခံချက်အပြည့်အဝရှိသည့် ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက် နိုင်ငံ ရေးပြဿနာကိုစစ်ရေးဖြင့် အဖြေရှာခြင်း မပြုဘဲ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာသည့် နိုင်ငံရေး ယဉ်ကျေးမှုသစ်တစ်ရပ်ကို ဖော် ဆောင်နေသည်နှင့်အညီ လက်ရှိငြိမ်းချမ်း ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ချင်းပြည်သူများ နှင့်အတူ လက်တွဲ၍တစိုက်မတ်မတ်ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြသည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၂ဝ ရက်နေ့၊ ချင်း အမျိုးသားနေ့သည် ဖလမ်းမြို့တွင် ၁၉၄၈ ခုနှစ်က ကျင်းပခဲ့သည့် ချင်းအမျိုးသားညီလာခံ၏ နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်ပြီး ယင်း ညီလာခံမှတစ်ဆင့် ချင်းပြည်နယ်တည် ဆောက်ရေးအတွက် မိမိကြမ္မာမိမိဖန်တီးခွင့်ကိုအသုံးပြု၍ ပဒေသရာဇ်အုပ်ချုပ် ရေးစနစ်အား ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးစနစ် အဖြစ် ပြောင်းလဲလိုက်သည့်နေ့ထူးနေ့မြတ် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးနှင့် ပြည် ထောင်စုအစိုးရတို့ကြား ချုပ်ဆိုခဲ့သည့် ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စုအဆင့် အပစ် အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ်ပါသဘော တူညီချက်များအရလည်းကောင်း၊ ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုအဆင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ်ပါ သ ဘောတူညီချက်များအရလည်းကောင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၂ဝ ရက်နေ့ကို ချင်းအမျိုးသား နေ့အဖြစ် ပြန်လည်သတ်မှတ်ရန်နှင့် ဇန်နဝါ ရီ ၃ ရက်နေ့ကို ချင်းပြည်နယ်နေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ရန် ညှိနှိုင်းနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ချင်းအမျိုးသားနေ့ကို ချင်းလူထုအနေ ဖြင့် အနှစ်သာရရှိစွာ ဖြတ်သန်းကြရန်လည်း ထုတ်ပြန်ချက်မှတစ်ဆင့် တိုက်တွန်းထား သည်။
ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍမှာ ဘဏ်စနစ်နှင့်ချိတ်တွဲထားခြင်းကြောင့် တစ်ခုခုတိမ်းချော်သွားပါက ဘဏ်များက
မြန်မာ-ထိုင်း ချစ်ကြည်ရေးစက်ဘီးစီးပွဲတော် နယ်စပ်အမှတ်(၁) တံတားကြီးပေါ်၌ ကျင်းပ၊ စက်ဘီးစီးသမ?
ရာဇဂြိုဟ်ဆည်မှနွံများ၊ အမှိုက်နှင့် ဒိုက်များရှင်းထုတ်ပြီး ရေအားလျှပ်စစ်ရေဝင်ပေါက် ပြုပြ??
အငှားကိုယ်ဝန်နဲ့ စတုတ္ထမြောက် ရင်သွေးရရှိတော့မည့် ကင်ကာဒရစ်ရှန်
မော်ရင်ဟိုနှင့် မက်ဆေ့ခ်ျအဆက်အသွယ်ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း မိုရာတာ ဖွင့်ဟ ၊​မန်ယူနှင့်ပွဲတွင် ?
ကျောက်စိမ်းထွက်ရာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျောက်မျက်ပြပွဲ တစ်နှစ်နှစ်ကြိမ်သာကျင်းပနိုင်ပြီး တ?